အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - YiZheng Heavy Machinery Co. , Ltd.
အမှုန့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကိုများသောအားဖြင့်မြေဆီလွှာကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုအတွက်အာဟာရများကိုအသုံးပြုသည်။ မြေဆီလွှာထဲသို့အာဟာရများလျင်မြန်စွာထုတ်လွှတ်သည့်အခါလျင်မြန်စွာပြိုကွဲနိုင်သည်။ အမှုန့်အစိုင်အခဲအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာကိုပိုမိုနှေးသောနှုန်းဖြင့်စုပ်ယူသောကြောင့်အမှုန့်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာများသည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများထက်ပိုကြာသည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုခြင်းသည်စက်ရုံကိုယ်တိုင်နှင့်မြေဆီလွှာပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကိုများစွာလျော့နည်းစေသည်။
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်မြေဆီလွှာသို့အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်အပင်များအား၎င်းတို့အားဖျက်ဆီးခြင်းထက်ကျန်းမာသောမြေဆီလွှာစနစ်များတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည့်အာဟာရများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများများစွာရရှိသည်။ နိုင်ငံအများစုနှင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၌ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုမှုကိုတဖြည်းဖြည်းကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တားမြစ်ခြင်းတို့ဖြင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုသည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
4. အိမ်ထောင်စုအမှိုက်: မီးဖိုချောင်စွန့်ပစ်။
နိုက်မုန့်အမှုန့်၊ ကိုကိုးပေါ်ရှိအမှုန့်၊ ကမာအခွံအမှုန့်၊ အမဲသားနောက်ချေးအမှုန့်စသည့်အမှုန့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာကုန်ကြမ်းများကိုအပြည့်အဝတူးဖော်ခြင်း၊ ရရှိသောဆွေးများကိုကြိတ်ခွဲခြင်း၊
အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် - ဆွေး - ကြိတ်ခွဲ - ဆန်ခါ - ထုပ်ပိုးခြင်း။
အော်ဂဲနစ်ကုန်ကြမ်းများကို dumper မှတစ်ဆင့်ပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။ ကာဗွန်နိုက်ထရိုဂျင်အချိုး၊ ရေပါဝင်မှု၊ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုနှင့်အပူချိန်တို့မှာဆွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအရာများစွာရှိသည်။ အာရုံစိုက်သင့်သည်:
၂. ကာဗွန် - နိုက်ထရိုဂျင်အချိုးသည် ၂၅ မှ ၃၀: ၁ ထိထိရောက်သောသီကွေးရန်အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်သည်။ ၀ င်သောပစ္စည်းအမျိုးအစားများများလေလေထိရောက်သောပြိုကွဲနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းသည်သင့်လျော်သော C: N အချိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။
၃။ ဆွေးကုန်ကြမ်းများ၏အစိုဓာတ်ကိုအများအားဖြင့် ၅၀% မှ ၆၀% အထိရရှိသည်၊ Ph ကို ၅၀-၈-၅.၅ တွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
4. roll-up, အဆွေးပုံ၏အပူလွှတ်ပေးလိမ့်မည်။ ပစ္စည်းကိုထိထိရောက်ရောက်ပြိုကွဲသွားသောအခါ, မှောက်လှန်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူအနည်းငယ်လျော့နည်းသွားပြီးနောက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးနာရီအတွင်းယခင်အဆင့်သို့ပြန်သွားသည်။ ဒါက dumper ၏အစွမ်းထက်အားသာချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃ ။ ဆန်ခါ
roller ဆန်စက်သည်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရုံသာမကအရည်အချင်းမရှိသောထုတ်ကုန်များကိုလည်းရွေးချယ်သည်။ ခါးပတ်သယ်ဆောင်မှတစ်ဆင့်ဆန်ခါစက်သို့ဆွေးများကိုသယ်ဆောင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလယ်အလတ်အရွယ်ဆန်ခါပေါက်များရှိသည့်စည်ဆန်ခါစက်များအတွက်သင့်တော်သည်။ ဆန်ခါကိုသိုလှောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မျိုးစေ့ကြဲခြင်းသည်ဆွေး၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ ဆွေး၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေပြီးနောက်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။
အများအားဖြင့်အိတ်တစ်ခုလျှင် ၂၅ ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်တစ်အိတ်လျှင် ၅၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ထုပ်ပိုးမှုတစ်ခုတည်းအနေဖြင့်ရောင်းချနိုင်သောအမှုန့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများကိုစီးပွားဖြစ်ရောင်းဝယ်ရန်အတွက်ဆန်ခါဓာတ်မြေသြဇာကိုထုပ်ပိုးစက်ထဲသို့သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။